I-Xiaomi Mi5s ne-Xiaomi Mi5s Plus, ama-mobiles okuqala ane-Snapdragon 821 entsha | Izindaba zamagajethi
I-Xiaomi Mi5s ne-Xiaomi Mi5s Plus, ama-mobiles okuqala ane-Snapdragon 821 entsha
Noma sekuphele amasonto sizwa ngomsebenzi futhi ukwethulwa okulandelayo kweXiaomi Mi5S, iqiniso ukuthi ukucaciswa kwayo, ukwakheka kwayo, i-Hardware yayo kube isimanga kuze kube manje. Emcimbini u-Xiaomi awuhlelile e-China, wethule le modeli entsha esuselwa kwabadumile I-Xiaomi Mi5, kodwa ngamandla amaningi namamodeli amabili azama ukulandela ezinyathelweni ze-Apple iPhone edumile.
Kepha ngokungangabazeki okumangazile ukuthi kunjalo i-brand phablet yokuqala eyaziwa ukufaka i-Snapdragon 821 entsha, iprosesa entsha yeQualcomm.
Kulokhu kwethulwa, uXiaomi ufune ukulandela ezinyathelweni ze-Apple futhi wethule izinhlobo ezimbili, iXiaomi Mi5S enesikrini esingu-5,2-intshi ne-Xiaomi Mi5S Plus enesikrini esingu-5,7-intshi. Zombili lezi zikrini zinokulungiswa okuphelele kwe-HD nokukhanya okuphezulu, ngaphezu kwe-Samsung Galaxy S7 Edge.
IXiaomi Mi5S izoba ne-64 Gb yesitoreji sangaphakathi kepha ayinayo i-slot yamakhadi we-microsd
Ngokuya nge-processor, i-Snapdragon 821 izohambisana ne-phablet kanye 6 Gb yememori yenqama ne-64 Gb yesitoreji sangaphakathi. Yize iXiaomi kulokhu ihlala ithembekile kwifilosofi yayo futhi izokwethula izinhlobo ezahlukahlukene zidlala ngemodeli, inani lememori yenqama nokugcinwa kwangaphakathi. Noma kunjalo, i-3 Gb yememori yenqama izoba ubuncane bomthamo kanye ne-6 Gb yenqama amandla amakhulu. Kanye ne-64 Gb yamandla amancane wangaphakathi kanye ne-128 Gb yomthamo omkhulu wangaphakathi.
Zombili izinguqulo zizofaka inzwa yekhamera eyi-13 MP ngemuva ne-4 MP ngaphambili kanye isifundi seminwe kanye neMIUI 8. Kodwa-ke, emuva nayo inekhamera embaxambili, i-stabilizer ne-double led flash.
Mayelana nokuxhumeka, womabili amamodeli ane-4G, i-wifi, i-bluetooth, i-NFC ne-GPS, siya ngokudingakalayo futhi okuyisisekelo namuhla, yize singazi ukuthi lezi zingcingo zizoba ne-800 band yamanethiwekhi ase-Europe. Kunoma ikuphi, ukuzimela kwalawa madivayisi kuphezulu njengoba benakho ibhethri le-3.000 mAh ku-Xiaomi Mi5S naku-3.800 mAh kuXiaomi Mi5S Plus, ukwanda okuhambisana nokwanda kwesikrini.
Elinye iphuzu elihle leXiaomi Mi5S entsha intengo yesiginali. Yize ine-hardware enhle, intengo ayiphezulu njenge-iPhone yakamuva noma i-Samsung Galaxy Note 7 yakamuva, kepha kunentengo encishisiwe. I- Imodeli yenqama ye-3Gb inezindleko zama-euro angama-300, Ngenkathi imodeli enenkumbulo eyengeziwe yenqama nokugcinwa kwangaphakathi kubiza kuphela ama-euro ayikhulu ngaphezulu, cishe ama-euro angama-100 cishe, into ehlaba umxhwele futhi iyindlela enhle kulabo abahlala benenkinga yememori yenqama ngezinhlelo zokusebenza noma isitoreji sangaphakathi. Kunoma ikuphi, kubonakala sengathi isikrini esikhulu siyinto ezojwayela ukunyamalala ngisho nakuXiaomi ngoba iXiaomi Mi5s Plus kubonakala ngathi ayinakho okungaphezu kwalokho, isikrini esihle. Nawe Uhlala ngasiphi iXiaomi Mi5s? Ucabangani ngesikhungo esisha seXiaomi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-Xiaomi Mi5s ne-Xiaomi Mi5s Plus, ama-mobiles okuqala ane-Snapdragon 821 entsha
Ngazi eziyisikhombisa kusho
Hamba ukopishelwe ku-iphone !! Ngithukuthele kakhulu ukuthi amaShayina ehlisa amanani ngokukopisha hhayi ukutshala imali ekwakhiweni.
Phendula uSe eziyisikhombisa
Akuyona yonke into eyakhiwe, futhi, ingcono kune-iPhone, kwenza mehluko muni uma ikopishelwa kulokho? Ngaleso sikhathi, i-iPhone yayikopishwa kusuka ku-HTC neMeizu
Ikhophi ye-Iphone hahahahaha bebevele befisa ukuthi bangakopisha okuthile. Leli yingqophamlando yokuthinta okuningi
Umdali wakho konke lokhu kwakungu-Apple ngakho-ke ngubani okopishela lapha. Izinkinga ezimbi kunazo zonke i-android ngunkulunkulu uma ingeyamasoni. Shabby
ISpaceX iqala ukuhlola injini yayo entsha yangaphakathi kwamaplanethi
I-Google ihlela ukwethula ilaptop ye-'Pixel 3 'ene-Andromeda ye-Q3 2017